ဘဝမှတ်တိုင်: Sony Xperia Z2 ကို Root လုပ်နည်း (How To)
Sony Xperia Z2 ကို Root လုပ်နည်း (How To)
Sony Xperia Z ဖုန်းအမျိုးအစားရဲ့ အသစ်ထွက် series ဖြစ်တဲ့ Sony Xperia Z2 ကုိုလည်း root လုပ်လုို့ရနေပါပြီ။ ဒီဖုန်းကုို root လုပ်နုိုင်ဖုို့အတွက်ကတော့ ဖုန်းကုို Bootloader Unlocked လုပ်ထားဖုို့ပဲလုိုပါတယ်။ ယခုနည်းလမ်းများကုိုလုပ်ဆောင်ရန် သင်ဟာ Android Knowledge နှင့်ပတ်သက်လျှင် Advanved Users Level ခန့်ဖြစ်ရပါမယ်။ မဟုတ်လျှင် ဖတ်ရှုလုပ်ဆောင်ရန် လွယ်ကူမည်မဟုတ်ပါ။
ကဲ…. Sony Xperia Z2 အား root လုပ်နည်းကုိုဆက်လက်ဖတ်ရှုကြရအောင်။
အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့အတုိုင်းပဲ Sony Xperia Z2 ကုို root လုပ်ဖုို့ ဖုန်းကုို bootloader unlocked လုပ်ထားဖုို့လုိုအပ်ပါတယ်။
Sony Xperia Z2 ကုို Bootloader Unlock လုပ်နည်းကတော့ အောက်က link မှာဖတ်ရှုလေ့လာနုိုင်ပါတယ်။
Root လုပ်ဖုို့လုိုအပ်တဲ့ file တစ်ခုဖြစ်တဲ့ SuperSU zip file ကုိုအောက်က link ကနေရယူပါ။
Bootloader Unlock လုပ်ပြီးပြီဆုိုရင်တော့ ဖုန်းကုို root access ရဖုို့ပထမအဆင့်အနေနဲ့ ဖုန်းကုို CWM Recovery သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။
CWM Recovery သွင်းရန်အတွက် လုိုအပ်ချက်တွေကတော့ ကွန်ပျူတာမှာ Sony Xperia Driver သွင်းထားရမယ် ၊ ADB & Fastboot Folder ရှိရပါမယ်။
Sony Xperia Z2 အတွက် Driver ကုိုအောက်က link ကနေရယူနုိုင်ပါတယ်။
ADB & Fastboot Command တွေရုိုက်ဖုို့လုိုအပ်တဲ့ ADB Tool folder ကုိုအောက်က link ကနေရယူနုိုင်ပါတယ်။
ADB & Fastboot folder အားရယူရန်
ADB Folder ကုို ကွန်ပျူတာရဲ့ desktop ပေါ်မှာ ဇစ်ဖြည်ထားလုိုက်ပါ။
CWM Recovery file ကုိုတော့ အောက်က link ကနေရယူပါ။
download ရယူထားတဲ့ Recovery file ကုို boot.img လုို့အမည်ပြောင်းပြီး ခုနက desktop ပေါ်မှာဇစ်ဖြည်ထားတဲ့ ADB Folder ထဲမှာသွားထည့်ထားပါ။
file တွေအကုန်ရယူပြီးပြီဆုိုရင်တော့ ဖုန်းကုို ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ် ၊ ဖုန်းကုို fastboot mode ထဲဝင်ပြီး
ကွန်ပျူတာကနေ Fastboot command အသုံးပြုပြီး အောက်က command ကုိုရုိုက်ပေးရမှာပါ။
Recovery သွင်းပြီးလျှင်အောက်ပါ command ကုိုရုိုက်ပေးရမှာပါ။
Recovery Mode ထဲသုို့ဝင်နည်း
ဖုန်းပါဝါစ အတက်မှာ sony logo ပေါ်ပါတယ်။ ယင်းအချိန်မှာ ဖုန်းရဲ့ Vol up ခလုတ်ကုိုနှိပ်ထားပါ။ LED မီးလုံးအရောင်များပြောင်းသွားသည်အထိနှိပ်ထားပါ။
Recovery Mode ထဲသုို့ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
Recovery Mode ထဲရောက်သွားရင် install zip ဆုိုတဲ့ function ထဲကုိုဝင်ပြီး ဖုန်းရဲ့ sd card ထဲမှာထည့်ထားခဲ့တဲ့ Super SU zip ဖုိုင်ကုိုရွေးပေးပြီး flash လုိုက်ပါ။ ဖုန်းက reboot ကျသွားပြီး ပြန်တက်လာရင်တော့ သင့်ရဲ့ Sony Xperia Z2 ဖုန်းဟာ Root Access ရနေပါပြီ။
ပုိုသေချာအောင် root access တောင်းတဲ့ app တစ်ခုခုသွင်းပြီး ဖုန်းကုို စမ်းကြည့်ပါ။
အောက်ပါအတိုင်း Superusers request တက်လာရင် ဖုန်းက root access ရနေပါပြီ။
သက်နုိုင်စုိုး (Myanmar Mobile Application Store)
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 5/11/2014 03:36:00 am
Mr,SoeThu! ကိုကို ဆိုးသူ3January 2016 at 10:38
Mr,SoeThu! ကိုကို ဆိုးသူ3January 2016 at 11:01
Xperia M5 E5663 လေးကို..root..ချင်လို့...ကယ်ပါအုံး......ဆရာတို့ရယ်...(ဒီကောင်လေးက..Securiy..တော်တော်နိုင်ပါတယ်...စုံနေပြီ စမ်းထားတာ..အရဘူး..ဆာ...)
ဒီဆိုက်ထဲမှာကျတော့ မဒေါင်းတတ်ဖူးဖြစ်နေတယ် ဒီထဲကဒေါင်းပြီး..ပို့မြန်မာလိုတင်ပေးပါလား...ဆရာ..
နေရိုင်း 16 January 2016 at 11:11